दशैंको खानपानले बढ्नसक्छ तौल, यसरी रहनुस फिट एन्ड फाइन ? - Gandak News
दशैंको खानपानले बढ्नसक्छ तौल, यसरी रहनुस फिट एन्ड फाइन ?
गण्डक न्यूज द्वारा ३ कार्तिक २०७५, शनिबार १७:०० मा प्रकाशित
तपाईंले हेक्का राख्नुभएकै होला, सामान्य दिनमा भन्दा बढी खानेकुरा खाइन्छ दशैंमा । दशैंको खानेकुरामा मासुजन्य परिकार धेरै हुने गर्छ । पाहुना निम्त्याएर भोज ख्वाउँदा होस् वा इष्टमित्रकहाँ पाहुना लाग्दा, केही न केही त खानैपर्छ ।
नातागोता, इष्टमित्र सबैकहाँ पुग्नैपर्ने, पुगेपछि केही न केही खानैपर्ने अवस्था हुन्छ यसबेला । त्यसैले चाहेर पनि यसबेला हामी आफ्नो मुख बार्न सक्दैनौं । ‘जे आउँछ, मज्जाले पचाउँछ’ शैलीमा आँखा चिम्लेर खाइदिन्छौं ।
अर्कोतिर दशैंको रमझममा भुलेर व्यायम गरिदैन । शारीरिक श्रम पनि गरिदैन । सुत्ने, उठ्ने तालिका पनि त्यती मिल्दैन । यसको नतिजा के हुन्छ ? स्वभाविक रुपमा शारीरिक तौल बढ्छ ।
तपाईं/हामीलाई थाहै छ, तौल बढ्नु स्वास्थ्यका दृष्टिले त्यती फाइदाजनक मानिदैन । यसले अनेक रोगलाई जन्म दिन्छ । त्यसैले हामी सकेसम्म आफ्नो तौल नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छौं । तर, कसरी ?
यसका निम्ति एउटा काइदाको उपाय छ ।
कसरी रहने फिट एन्ड फाइन
शरीरको तौल कम गर्न त्यति गाह्रो पनि छैन । यो त केवल आफ्नो इच्छाशक्तिमा भर पर्ने कुरा हो कि आˆनो शरीरलाई कति फिट राख्ने हो ? शरीरलाई फिट राख्न तथा शरीरको तौल कम गर्न सकारात्मक सोच राखेर हामीले आफैलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
– दशैंमा पाहुना लाग्दा होस् वा आफ्नै घरमा मिठोमसिना खाएको बेला, सुरुमै मानसिक तयारी गरौं कि, आज सही र सन्तुलित खानेकुरा मात्र सेवन गर्छु ।
– दशैंमा थरीथरी खानेकुरा बनाइन्छ । त्यसमा माछामासुदेखि हरियो सागपात, सलादसम्म हुन्छ । आफ्नो प्लेटमा राखिएको खानेकुरामध्ये सलाद, सागपातमा जोड दिनुपर्छ ।
– माछामासु वा अन्य परिकार खाँदै नखाने भने होइन, तर हरियो सलादले पेट भरेपछि अन्य खानेकुराले पेट ओगट्न पाउँदैन ।
– पेट चर्कनेगरी खाना खाइएको छ भने केही क्षण विश्राम गरेर पिंग खेल्ने वा अन्य शारीरिक गतिविधि गर्ने ।
– संभव भएसम्म सुत्ने र उठ्ने तालिकालाई नियमित गर्ने । ९-१० बजेभित्र सुत्ने र विहान ५ बजेअघि नै उठ्ने अभ्यास गर्ने । यसले पनि हामी अनियनित्रत खानेकुराबाट बच्न सक्छौं । रातभर बसेर खाना खाइरहँदा स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ ।
– एकसाथ धेरैथरी परिकार सेवन नगरौं । बरु धेरै पटक खाने, तर थोरै थोरै ।
– मदिरा सेवन गर्नुअघि जुस, पानी पर्याप्त मात्रामा सेवन गरौं, यसले गर्दा शरीरमा मदिराको असर कम हुन्छ ।
– मदिरासँग माछामासु सेवन गर्नु राम्रो होइन । बरु सलाद वा फलफूलसँग सेवन गर्न सकिन्छ ।
– तारेको, भुटेको, धेरै मसलेदार खानेकुरामाथि नियन्त्रण गरौं ।
– एकै स्थानमा लामो समय बस्ने, तास खेल्ने, टिभी हेर्ने भन्दा पनि उठ्ने, हिँड्ने, यताउता गर्ने, खेल्ने काममा आफुलाई व्यस्त बनाऔं ।
गैरीमुदीबाट काठमाडौंका लागि छुटेको बस दुर्घटना, एककाे…
राजीनामा दिन प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रस्ताव उपसभामुखद्वारा…
पोखराको अमरसिंहमा आज सप्तरंग सांगीतिक कार्यक्रम हुँदै
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा ६१ करोड खर्च, यस्तो छ बजेट…
स्याङजाको वालिङमा नेपाली नक्कली नोट फेला ,
पोखरामा ट्याक्टरको ठक्करबाट बालकको मृत्यु
कालापानीबारे प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीपछि भारतीय मिडिया…
राजु र रबिन गर्जिए – ‘हाम्रो सीमा चेप्न नखोज,…
भारतीयले समेत ‘लिपुलेक, कालापानी नेपालकै हो’…
महिला प्रअमाथि खुकुरी प्रहार, गम्भिर घाइते पुनलाई…
कोत्रेमा सवारी दुर्घटना, रामबजारका भट्टराई सहित ७…
पोखराको बागमारामा सवारी दुर्घटना हुदाँ पौडेल…
ब्रेकिङ न्यूजः पोखरा जिरो किमिमा जीपलाई पोलले…
कसले काटिदियो कृषकको खोरमा बाँधेका बाख्रा?
पोखरा घुमेर बंगलादेशी राष्ट्रपतिले भनेः ‘म…
महिला प्रअमाथि खुकुरी प्रहार, गम्भिर…
दमौलीको हाईस्कुलटारमा ग्याङ फाइट: खुकुरी…
१९ वर्षीया किशोरीको दुई वटा योनी
तनहुँको अमरापुरीको बुल्दी पुल छेउबाट…
Reg. No: 1616/076/77 (763/074/75)
Reeyaz Timilsina (Australia)
अश्विन दानी (गोरखा)